Yay si toosa ugu socotey hadalkii wasiirka warfaafinta ee farogelinta shisheeyaha - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Yay si toosa ugu socotey hadalkii wasiirka warfaafinta ee farogelinta shisheeyaha
Dawlada Somaliya ayaa shalay si toosa uga hadashay farogelinta kooxda sheegata beesha caalamka ay ku hayso siyaasada arimaha gudaha ee Somaliya xilli ay ku haystan laba horjooge xerada XALANE ayagoo ku gorgortama.
Ayadoo kooxdan sheegata beesha caalamka ay hadda soo kala baxayaan ayagoo awal isticmaali jirey magaca guud ee sheegashada beesha caalamka ayaa usbuucyadii u dambeeyay waxa jirey qoraalo munaafaqad cad ah oo ku jeeda dalka iyo doorashadiisa.
Waxa ugu badnaa kuwa ka soo baxaya labada masuul ee Maraykanka u fadhiya taandhooyinka xerada XALANE ayagoo si caadiya u xaqiraya dawlada Somaliya iyo dastuurka iyagu gacantooda ku qoreen ee dhoodhoobka ah.
Iyagu waxay rabaan inay doorashada gacanta ku dhigaan madaxweynahana sidaa booska uga tuuraan, lana soo baxaan sharci iyagu leeyihiin taasina ma dhacayso.
Haddaba waxa ugu sii daran qoraaladaas mid ka soo baxay Noorway oo iyadu wadatey Xasan Cali Kheyre kana cadhaysan dacwada badda, toosna ula jirta Kiiniya jecelna in xukunka laga tuuro Farmaajo.
”Waxay qoreen inay rabaan inuu xukunka si dhaqsa ah u wareejo, waxana si toosa uga jawaabtey wasaarada arimaha dibedda Somaliya oo canbaaraysay hadalkaa lagu qorey barta baraha bulshada ee safaarada Noorway. Waxayna keentay in Noorway dib isku saxdo, wixi hadda ka dambeeyana ay u fiirsato waxay qoreyso.
Si kastaba ha ahaatee marnaba ma dhacayso in dawladu XALANE ugu tagto gaalada halkaa lagu qabto shirka doorashada. Dagaalka doorashada ee ajaanibta ayaa ku qotoma inaanu dalku degin iyo in kheyraadka dalka ay helaan inta ugu badan.